I-Raw DMAA powder (13803-74-2) 1,3-dimethylamylamine | AASraw
/ iimveliso / Prohormone / DMAA powder
SKU: 13803-74-2. Udidi: Prohormone
I-1,3-dimethylamylamine (i-DMAA) yinto eyenza i-neural stimulant eyenziwa ngokubambisana njengesisombululo esisisiseko kwizongezelo zokutya ukuze kuphuculwe ukusebenza kwezemidlalo kwaye inike amandla okwandisa.
Ividiyo yeDMAA Raw powder
I-Raw DMAA powder Abalinganiswa basisiseko
igama: DMAA powder
I-molecular Formula: C7H17N.HCl
Isisindo somzimba: 151.68
Ukusetyenziswa kwe powder DMAA in steroids umjikelo
I-DMAA Iifama eziluhlaza
I-Methylhexanamine eyaziwa ngokuba yi-1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) okanye i-dimethylamylamine kuphela (i-DMAA).
DMAA powder oluhlaza
Isiqalo sokuqala sokuqala se-1,3-DMAA sisekhompini ye-10-20mg kwaye ekugqibeleni sifinyelela ku-40-60mg ngosuku, akukho bungqina boqobo bokuxhasa olu luhlu lwezilingo kodwa kubonakala ngathi luhlu lwee-standard ze-1,3-DMAA kwimarike.
I-1,3-DMAA yaziwa ngokuba ivaliwe yimibutho eyahlukeneyo yemidlalo ngenxa yemvelo yayo efana ne-amphetamine, kwaye ayifanele isetyenziswe ngabadlali abavavanywe.
Amadoda ayisishiyagalombili abikela ebhodini kusasa emva kokukhawuleza ngokukhawuleza kwaye athola enye i-25 mg ngomlomo weDMAA. Iisampula zegazi zaqoqwa ngaphambi nangemva kweeyure ze-24 emva kwe-DMAA ukungenisa kunye nokuhlalutya kwi-plasma ye-plasma ye-DMAA usebenzisa i-acrometography yamanzi ephezulu. Ukuphumla kwenhliziyo, ukunyanzelela kwegazi, kunye nokushisa komzimba kwalinganiswa.
Omnye umxholo wawungabandakanywa kuhlalutyo lweedatha ngenxa yamanqanaba aqhelekileyo e-DMAA. Uhlalutyo lwabathathi-nxaxheba abasixhenxe abalileyo babonisa ukuba i-DMAA ivumelekile ngomlomo nge-20.02 ± 5 L ∙ hr-1, umthamo womlomo wokusabalalisa i-236 ± 38 L, kunye nekota yokuphela kwe-8.45 ± 1.9 hr. Isikhathi seLag, ukulibaziseka kokubonakala kwe-DMAA kwindlela ehamba ngayo emva kokulawulwa okungaqhelekanga, kwahluka phakathi kwabathathi-nxaxheba kodwa kunomlinganiselo malunga nemizuzu eyi-8 (0.14 ± 0.13 hr). Ukuxinwa kwe-DMAA yezifundo kuzo zonke izifundo kwagqalwa kwiiyure ze-3-5 emva kokungena kwaye kwakufana kakhulu kwizifundo, enentsingiselo ye ~ 70 ng ∙ mL-1. Intlawulo yenhliziyo, uxinzelelo lwegazi, kunye nokushisa komzimba kwakungakhange kuthintele unyango lwe-DMAA.
Isexwayiso kwi-DMAA powder eluhlaza
I-Armed Food and Drug Agency (i-FDA) okwangoku yenza konke okusemandleni akho ukucima ukuhanjiswa kunye nokuthengiswa kwazo zonke izongezo zokutya eziququzelelekayo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukulahleka kwesisindo esibizwa ngokuthi i-dimethylamylamine (i-DMAA).
I-DMAA yinkomfa yezinto eziphilayo ezisetyenziswe kwimveliso eyenza ukulahleka kwesisindo okanye ukuphuhliswa komzimba. Nangona kunjalo, isithako singabangela iziphumo ezibi kakhulu, ezifana:
Kukho iziganeko ze-86 zokugula okanye ukufa ezihlobene nokusetyenziswa kwe-DMAA, ngokwe-FDA. Ezinye zezifo ziquka iingxaki zentliziyo kunye neenkqubo zesantya okanye izifo zengqondo, nangona kungekho bubungqina bokubonisa ukuba i-DMAA yiyona nto ibangeleyo le miqathango.
I-DMAA powder eluhlaza Imiyalelo eminye:
I-DMAA (i-1,3-dimethylamylamine) isiphumo se-amphetamine esithengiswa kwimidlalo yezemidlalo kunye nemveliso yokulahlekelwa kwindleko, ezininzi zazo ezithengiswa njengezongezelelo zokutya. I-DMAA ayiyona isithako sokutya, kwaye iimveliso eziqulethwe yi-DMAA zithengiswa njengezongezelelo zokutya zingekho mthethweni kwaye ukuthengisa kwabo kuphula umthetho.
Eyaziwa nangokuthi i-methylhexanamine okanye i-geranium extract, i-DMAA idlalwa njenge-"nature" evuselelayo; nangona kunjalo, i-FDA ayikwazanga nayiphi na isayensi ethembekileyo ebonisa ukuba i-DMAA ikhona ngokwemvelo kwizityalo. Nangona i-DMAA ngexesha elinye livunyiwe njengesiza solawulo lwe-decongestion ye-nasal, ayisayi kuvunyelwa le ntsebenzo kwaye akukho tyenziswa kwezonyango lwe-DMAA iyakubonwa namhlanje. I-DMAA, ngokukodwa ngokubambisana nezinye izithako ezikhuthazayo ezifana ne-caffeine, ingaba ngumngcipheko wempilo kubathengi. Ukuthatha i-DMAA kunokunyusa uxinzelelo lwegazi kwaye kukhokelela kwiingxaki zentliziyo ezibangelwa ukuphefumla okufutshane kunye nokuqiniswa esifubeni ekuhlaselweni kwentliziyo.
I-FDA iyaqhubeka nokucebisa abathengi ukuba bangathengi okanye basebenzise iimveliso ezithengiswa njengezongezelelo zokutya eziqulethe i-DMAA ngenxa yemingcipheko yezempilo abayifakayo.
Ngokusekelwe kwezinye zamabango ezenziwe ngabavelisi be-DMAA-based productsor supplements, i-1,3-dimethylamylamine ingatsho ukuba isebenze ngokuyinhloko njengendlela ephakamileyo yeentambo. Iingeniso ezinokwenzeka zezi mveliso zihambelana ngokukodwa nokuphucula ikhono lokuqonda.
Ngenxa yeempembelelo zaso, i-DMAA iya kuba yinto ethandwa kakhulu kuluntu olusakhayo njengomsebenzi wokuqala wokusebenza.
I-DMAA ivuselela amandla. Ucwaningo lwe-2011 lubonise ukuba i-DMAA ikhulisa uxinzelelo lwegazi ngaphandle kokunyuka kwezinga lentliziyo. Oku kungaba yindlela enye eyona ndlela i-DMAA ivuselela ngayo umzimba. Olunye uphando lwe-2012 lubonise ukuba i-DMAA iboniswe ukuba ayinayo impembelelo ekuphumeni kwengcinezelo yegazi xa ungayithathi. Oku kuthetha ukuba ukungena kwe-DMAA kwandisa uxinzelelo lwegazi ngelixa lisebenzisa, kodwa xa imiphumo yalo igqithise uxinzelelo lwegazi libuyela kwizinga eliphumayo lokuphumula .
I-DMAA inokunceda ukutshisa amafutha. I-supplementary supplement ene-DMAA, i-OxyELITE Pro, inegalelo ekulahlekeni komzimba kwi-32 abadala abadala xa bethengisa i-capsule enye ngosuku ngemini elishumi elinesine. I-DMAA yandisa ukwanda kwenkunkuma kunye nokunyusa izinga lokushisa komzimba kubantu abadala be-12, ekucingelwa ukuba baholele emzimbeni ukulahlekelwa yintsima ngexesha elide.
I-DMAA inokuphucula ukusebenza komzimba. Kwiengqungquthela, iindleko eziphezulu zesongezelelo sokutya eziqukethe i-DMAA ziphucule ukusebenza komsebenzi. Nangona kunjalo, emva kweeveki ze-4 zokusetyenziswa kwansuku zonke, yalahlekelwa yiphumo layo.
I-DMAA inokuphucula imemori yesikhashana. Ucwaningo lwe-2015 olupapashwe kwi-Journal of Athletic Training lubonise ukuba ukusetyenziswa kwe-5.5 ye-supplementary supplement equkethe i-DMAA iphuculise ingcamango kunye nenkumbulo emfutshane.
III. DMAA powder oluhlaza HNMR
I-Raw DMAA yokurhweba i-powder Marketing
Indlela yokuthenga i-DMAA powder kwi-aasraw
I-AAS eluhlaza ihlinzeka ngobumsulwa 98% DMAA i-powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iilebhu zangaphantsi ekusebenziseni ngomlomo.
I-Raw DMAA powder Recipes:
I-5 g yakha i-5 g bcaa'a 200-400 mg i-caffeine 3.5 g beta alanine (iindidi kunye kunye nokuthinteka ukukhathala) 6 g citrulline malate (ipompu) 1.2 g ALCAR (i-focus focus stimulant) i-DMAA 50 mg okanye .050 umxube wexal
Kufuneka ulinganise le shit bruh ukuze uthenge isilinganisi. KUNYE I-DMAA IYA KUFUNA. Ndiyongeza kuphela i-DMAA kanye ngeveki kuba awufuni ukuziva uxhomekeka kakhulu kwi-pre-workouts kwaye yenza ukuba uzive ulungele ukuba ungaxhomekeke kuyo xa isetyenziswe rhoqo.
Yintoni i-DMAA powder esetshenziselwa ukwakha umzimba?
ngokutsha 1 ngenxa DMAA powder
I-DMAA powder iyinhlakanipho
Copyright © 2019 aasraw Wonke amalungelo agcinwe. Eyilwe ngu www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.phcoker.com www.wisepowder.com